Posted by MaungTaing Pin at Saturday, May 16, 2020 No comments:
ယိုးဒယားကနေ ဥနီ၊ ရွှေပဲသီး၊ မုန်ညှင်း၊ ဘိုစားပဲ၊ဘေဘီ cornငရုတ်ပွ၊ အပ်မှို၊ နှစ်တရာပဲ၊ ကညွတ်၊ ကြာစွယ်၊ ငရုတ်ပွ ဝါ/နီ၊ မှိုဖြူ/ မှိုမဲစသည့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်နေသည့်အပေါ်ဝေဖန်ဆန်းစစ်မှုများဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစိုက်ပျိုးရေးအပိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီများကလေ့လာဆန်းစစ်မှုများအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်းတာဝန်ရှိသူများကဖတ်ကြရဲ့လားမသိပါ။ဒီသီးနှံတွေကိုမြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေပဲ ထိုင်းမှာ သွားစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်နေပြီးမြန်မာကိုပြန်သွင်းလာတာလို့ဆိုကြပါတယ်။micro economic, macro economic နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျနော်တို့တတွေ facebook မှာအကြောင်းအရာပေါင်းစုံဆွေးနွေးဖြစ်ကြပါတယ်။အားလုံးကတော့အရောင်အသွေးမရှိကြပဲတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရေးအတွက်မိမိသိသမျှနားလည်သမျှတွေချပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ယောက်ကတော့ လုပ်ငန်းတော်တော်များများလုပ်ကိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့ပညာတတ်လုပ်ငန်းရှင်၊ တစ်ယောက်ကတော့အရင်အစိုးရလက်ထက်မှာစီးပွားရေးကိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဝန်ကြီးတစ်ယောက်၊စီးပွားရေး၊စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းဟောင်းပင်စင်စားဖြစ်တဲ့ကျနော်စသည်တို့ဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် tag ပြုလုပ်ပြီးအကြောင်းအရာပေါင်းစုံဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီပြဿနာဟာဘယ်လိုစခဲ့ပြီးဘယ်လိုအဆုံးသတ်သွားနိုင်မလဲဆိုတာသိချင်တဲ့အတွက် LIFT ရဲ့Myanmar Analysis of Farm Production Economic က i pad ထဲမှာ pdf ရှိနေတဲ့အတွက်ပြေး ဖတ်ကြည့်မိပါတယ်။ မြန်မာမှာ ဟိုတယ်တွေ၊ ရက်စ်တောရင့်တွေ ပြည်တွင်းကကော ပြည်ပကပါလာရောက်တည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့အတွက် လတ်ဆပ်ပြီးအရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့သားငါး ပုဇွန်တွေ ဟင်းသီးဟင်းရွက်သစ်သီးဝလံတွေအမြောက်အများဝယ်လိုအား demand ရှိကြပါတယ်။ဒီလိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းဖို့ပြည်တွင်းမှာ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါမလား? မြန်မာမှာ ဘာသီးနှံပဲ ထုတ်လုပ်ထုတ်လုပ်အရည်အသွေးကောင်းမွန်အောင်ထုတ်လုပ်မှု အပိုင်းမှာ အားနည်းကြပါတယ်။တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့ဆိုတာအနီးအနားမှာရှိတဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အားကိုယူသင့်ရင်ယူရပါလိမ့်မယ်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်သစ်သီးဝလံနဲ့ပတ်သက်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံဟာရှေ့တန်းမှာရှိနေပါတယ်။ပိုစ့်တစ်ခုမှာစပါးသီးနှံကိုဆိုရင် အထွက်ကောင်းဖို့သေချာတဲ့ဒေသတွေဖေါ်ထုတ်ပြီးအဲဒီဒေသတွေမှာစိုက်ဖို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာသူနဲ့သင့်လျော်တဲ့ငွေအမြန်ပေါ်တဲ့သီးနှံတွေစိုက်ဖို့အတွေးရဲရဲ နဲ့ရေးလာတာလည်းဖတ်ရပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာ ဆန်လိုအပ်ရင်ပြည်ပက တင်သွင်းပေါ့ သူကအဲဒီလိုဆန်ဆန်လေးရေးထားပါတယ်။အထက်မှာတင်ပြတဲ့စာတမ်းမှာ မြန်မာလယ်သမားဟာစပါးသီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရာမှရလာတဲ့ဝင်ငွေဟာအာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာ အနည်းဆုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ် တဲ့။မလေးရှားဟာအရင်က self sufficiency ဆိုပြီးစပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ဖို့ ဦးစားပေးလုပ်ကိုင်နေရာကနေပေါ်လစီပြောင်းပြီးဆန်ကို ပြည်ပကနေတင်သွင်းကာ ပြည်တွင်းစားနပ်ရိက္ခာ ကိုဖူလုံစေခဲ့ပါတယ်။စပါးစိုက်တဲ့မြေနေရာတွေကို အခြား ငွေအမြန်ပေါ်စေတဲ့သီးနှံတွေစိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်။အခု လည်းဒီသဘောမျိုးပါပဲ။
စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ကျနော့ဘော့စ်ကတော့" ဘယ်လောက်ရေးရေး ပြောပြောမလုပ်တဲ့ mind set" ဆိုပြီးသူအားမလိုအားမရဖြစ်တာကိုဖေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေထိုင်းမှာထုတ်လုပ်ပြီးရန်ကုန်သီရိမင်္ဂလာဈေးသွင်းနေတာတွေကြားရပြီးအလန့်ထညက် ဖြစ်ကြတယ်။ကုန်သွယ်မှုသဘောတရားတွေပါပဲ။ မှောင်ခိုပဲဝင်ဝင် တရားဝင်ပဲဝင်ဝင် လူတွေဟာလုပ်စားကိုင်စားဖို့အတွက် ပြောင်းပြန်စီးဆင်မှုဖြစ်ချင်ဖြစ်လုပ်နေကြမှာပါ။ ရန်ကုန်မှာ ညောင်နှစ်ပင်၊ငါးဆူတောင်၊ မှော်ဘီ စတဲ့နေရာတွေမှာဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေကြတာပဲ။Myanmar Master Chef ဒိုင် ဖြစ်တဲ့ Sharkyပိုင်ရှင်လည်း ပုဂံ မှာ ဟိုတယ်သုံး sweet basil တွေကို green house နဲ့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေတာလည်းMRTV4မှာကြည့် လိုက်ရပါတယ်။Go Green Myanmar ကဒေါ်လဲ့တို့လည်း ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုစိုက်ပြီးစင်ကာပူ NTCU Cold Storage တို့ကို organic ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေပို့နေကြလဲမသိပါ။ဈေးကွက်တစ်ခုတော့ရနေပါတယ်။အဲတော့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်းက တနိုင်တပိုင်တွေ လုပ်နေကြတာကိုတွေ့ရပေမဲ့ တကယ်အားပေးကူညီရမဲ့စိုက်ပျိုးရေးဌာနကြီးကတော့စပါးလည်းစပါးအလျောက်၊ ပဲလည်းပဲအလျောက်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်သစ်သီးဝလံလည်းသူ့အတိုင်းအတာနဲ့ အလျောက်အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဝိုင်းလုပ်နေကြပေမဲ့ကာယကံရှင်ကတော့ သူနဲ့မဆိုင်သလိုပေါ်ပင်လေးတွေပဲလုပ်နေလို့ကတော့ ဒီလို reverse effect တွေပေါ်လာနေအုံးမှာပဲဆိုတာ သတိပေးလိုက်ပါရစေ။LIFTFund ကရေးထားတဲ့ Myanmar Analysis of Farm Production Economic ကိုလည်းဖတ်ကြည့်ကြပါအုံးလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်။
credit: Ngwe Tun
credit: Sai Pyae Htet
Posted by MaungTaing Pin at Thursday, February 21, 2019 No comments:
စင်ကာပူ တက္ကသိုလ်တွေ ပေါ်လီတက်ကနစ်တွေ မှာ Business Center တွေရှိလားမသိပါ-- စာသင်တာနဲ့ပဲဆိုင်တဲ့ Business Department ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး တက္ကသိုလ်တွေ ကျောင်းတွေရဲ့ ဘဏ္ဍာရေး စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်လုပ်ငန်းတွေကို တာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်ပေးတဲ့ ဌာန ကိုဆိုလိုတာပါ။ National University Hospital NUH ဆေးရုံ မှာ တော့ Business Center ဆိုတာ ရှိတာ တွေ့ရပါတယ်-- ဆေးရုံတက်လာတဲ့လူနာ (ဥပမာ ခွဲစိပ်ကုခံရမဲ့လူနာ) နဲ့ အထူးကုဆရာဝန် team တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အခါ ဆရာဝန် consultant တွေကလူနာရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို အသေးစိပ်ရှင်းပြပြောဆိုဆွေးနွေးသလို လိုက်ပါလာတဲ့ Business Manager ကလည်း လူနာ ရှင်ကိုကုန်ကျနိုင်ဖွယ်ရာရှိတဲ့ စရိတ်တွေ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ခွင့်ပြုထားတဲ့ ပံပိုးမှုထဲက ဘယ်လောက်ခံစားနိုင်တယ်-- ကျန်းမာရေး အာမခံရှိရင်လည်း ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာ မကုသခင်ကတည်းကသေချာရှင်းလင်းပါတယ်--ဆေးရုံရဲ့ဝင်ငွေ၊ အသုံးစရိတ်၊ စီမံခန့်ခွဲရေး အလုပ်တွေ ဟာ Business Center ရဲ့ တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်—ဒါကြောင့် ဆရာဝန် consultant team ထဲမှာ Business Manager တစ်ယောက်ထည့် ထားရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်--တက္ကသိုလ် တွေ ပေါ်လီတွေ အခြား Institutions တွေမှာလည်း ရှိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်--
ကျနော်တို့ တက္ကသိုလ်တွေမှာတော့ လောလောဆယ်အစိုးရဘတ်ဂျက်ကိုပဲမျှော်ပြီးသုံးစွဲနေရတာကြောင့်ဒီလို ခေတ်နဲ့ အညီအစီအမံမျိုးရှိဟန်မတူသေးပါ-- တက္ကသိုလ်တွေ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလာရင်တော့ လိုအပ်လာလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်-- အဲလိုဆိုရင်တက္ကသိုလ်ဖွဲ့စည်းပုံကတော့ လက်ရှိဖွဲ့ စည်းပုံနဲ့ မကိုက်ညီနိုင်တော့ပါ-- ကျောင်းသားရေးရာကိစ္စတွေကို ကျောင်းသားသမဂ္ဂကလုပ်မယ်၊ ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စ၊စီမံခန့်ခွဲရေးကိစ္စတွေကို Business Center ကလုပ်မယ်--သင်ကြားရေးကိစ္စတွေကိုပါမောက္ခတွေစုဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့ကလုပ်မယ်၊ သုတေသနလုပ်ငန်းတွေ ကိုပါမောက္ခတွေစုဖွဲ့ထားတဲ့သုတေသန လုပ်ငန်းအဖွဲ့ နဲ့ Business Center ကကြီးကြပ်မယ်၊ ပြင်ပကလာအပ်တဲ့သုတေသန လုပ်ငန်းတွေလုပ်ရကိုင်ရတော့မယ်ဆိုရင် ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စကပါလာပြီ မဟုတ်လား၊
ဖွဘုတ် ပိုစ်တွေ လျှောက်ဖတ်ရင်း စိတ်ကူးယဉ်မိတာလေးတွေချရေးလိုက် တာပါ၊ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးဆိုရင် ပြုပြင်မွမ်းမံနေပါတယ်-- အစိုးရဘတ်ဂျက်လည်းပါ ပါလိမ့်မယ် --Contribution လို့ခေါ်နိုင်တဲ့ လှုဒါန်းငွေတွေကိုစီမံခန့်ခွဲရတာလည်း Business Center ရဲ့ အလုပ်ပါ ဥပမာ ဆေးရုံ လူမြင်ကွင်းမှာ ဘယ်အဖွဲ့အစည်း၊ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ် က ဘယ်နှစ်မှာ ဘယ်လောက်လှုဒါန်းသလဲဆိုတာ LED display screen ကြီးတွေထောင်ပေးထားပြီးဆွဲဆောင်ရမှာပါ၊ ဆေးရုံတွေ ကျောင်းတွေ တက္ကသိုလ်တွေမှာ contribution တွေလိုပါတယ်၊ သူငယ်ချင်း WHO ဆိုရင် အာအိုင်တီ ပရဝဏ်ထဲကထွက်ပြီး ဆေးရုံကြီးမှာတောင် contribution လုပ်ခဲ့ပါတယ်— Business Center ဟာဆေးရုံမှာ ဘာတော့ လိုနေတယ် ဆိုတာလိုက်ကြည့်ပြီး ဘယ်လောက်ကုန်ကျစရိတ်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာတွေလည်း potential ရှိတဲ့ လှုဒါန်း လိုသူတွေကို ချဉ်းကပ်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနိုင်ပါတယ်-- marketing ဆင်းသလိုမျိုးပေါ့—ဒါဆိုရင် လှုတဲ့သူတွေကလည်း သူတို့အလှု ဟာထိရောက်မှုရှိတဲ့ အတွက်လှုလိုကြမှာပါ၊ စင်ကာပူလိုချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံ က အစိုးရဆေးရုံမှာတောင် contribution လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်အမည်တွေ ကို LED display လုပ်ထားပါတယ်၊ ထင်ရှားတဲ့ အစိုးရခေါင်းဆောင်အမည်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်၊အစိုးရအဖွဲ့ ဝင်တွေဟာလစာတော်တော်ကောင်းကြတာကိုး။
မြန်မာကပိုလိုပါတယ်--organised ဖြစ်အောင် လုပ်ထားနိုင်ရင် ပြည်သူတွေဆီကလှုဒါန်းတာတွေများလာမှာပါ—နောက်ပြီး လောက် လောက်လားလား ထိထိရောက်ရောက် လှုဒါန်းတဲ့အလှုရှင်တွေကိုလည်း သမ္မတ ကဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးတွေ ပေးကြရမှာပေါ့ဗျာ--
Posted by MaungTaing Pin at Wednesday, February 20, 20194comments:
မြန်မာရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ ထိုင်း၊ မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ကိုရီးယား၊ဂျပန်၊အရှေ့ အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေမှာသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်-- အခုလိုပြည်တွင်းစီးပွားရေးအခြေအနေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းပြည်ပကိုထွက်အလုပ်ဖို့ပြည်သူအများစုဟာ ပတ်စ်ပို့ရုံးရှေ့ မှာပတ်စ်ပို့ပြုလုပ်ဖို့အတွက်နံနက်စောစောတန်းစီနေကြတာလည်း Facebook သတင်းတွေမှာတွေ့နေရပါတယ်--အရင်ကနိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်ကြတယ်ဆိုတာမြို့ နေလူတန်းစားတွေများပြီးဘွဲ့ ရတွေသက်မွေးကျောင်းပညာတစ်ခုခုတတ်သူတွေ skilled worker တွေသာများပါတယ်--အခုအခါမှာတော့တောနေလူတန်းစားလုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်သူတွေပါပြည်ပထွက်ဖို့ကျိုးစားလာကြတာကိုတွေ့နေရပါတယ်--လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်လောက်ကရေစကြိုမှာ ဘဏ်ဖွင့်ဖို့လေ့လာရေးသွားခဲ့တော့ကုန်သည်အသင်းရဲ့စီစဉ်ပေးချက်အရရေစကြိုကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်အသင်းနဲ့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်--သူတို့တတွေပြောပြချက်အရရေစကြိုတစ်ဝိုက်လောက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကအရွယ်ကောင်းထန်းတက်လုပ်သားတွေအတော်များများ မလေးရှား နိုင်ငံမှာသွားအလုပ်လုပ်နေကြတယ်--တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်သူ့အဆက်အသွယ်နဲ့ သူသွားလိုက်ကြတာထန်းတက်လုပ်သား ၈၀၀၀၀ လောက်မလေးရှားနိုင်ငံမှာ အလုပ်သွားလုပ်နေကြတယ်-- ထန်းတက်မဲ့သူမရှိတော့လို့ ထန်းညက်တောင်အထွက်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရတယ်--မောင်တိုင်ပင်အတွက်ဘဏ်ခွဲဖွင့်ဖို့လာတာဆိုတော့ဒေသအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းတွေကွယ်ပျောက်ကုန်တာကိုစိတ်မဝင်စားနိုင်ဘူး--မလေးရှားနိုင်ငံမှာ အလုပ်သွားလုပ်နေတဲ့ လူ ၈၀၀၀၀ လောက်လစဉ်ငွေပို့တဲ့လုပ်ငန်းချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ရင်ဘဏ်ခွဲတစ်ခုတော့ဖွင့်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ အဖြေတစ်ခုတော့ရလိုက်တာပေါ့ -- မောင်တိုင်ပင်ဘဏ်ကထွက်သွားပြီးရေစကြိုမှာဘဏ်ခွဲဖွင့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်--ပြောချင်တာက ရေစကြိုကုန်သည်အသင်းလိုအသင်းကတောင်ထန်းတက်လုပ်သား ၈၀၀၀၀ လောက်မလေးရှားနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေကြောင်းအဲဒီအချိန်ကစာရင်းရှိခဲ့ပါတယ်--
မောင်တိုင်ပင်တို့နိုင်ငံက ပြည်သူတွေ ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှာဘယ်လောက်သွားအလုပ်လုပ်နေကြသလဲဆိုတာစာရင်းရှိကြပါသလား ? သူတို့တတွေမိသားစုဆီပို့တဲ့ မြန်မာကျပ်ငွေဘယ်လောက်များရှိပါသလဲ? မောင်တိုင်ပင်ခန့်မှန်းကြည့်တာကတော့မြန်မာကျပ်ငွေ ကုဋေနဲ့ချီပြီးရှိမယ်ထင်ပါတယ်--အဲဒီငွေပမာဏဟာအရင်ကမပြောပလောက်ပေမဲ့ အခုအချိန်မှာတော့ GDP တွက်ချက်တဲ့နေရာမှာ ဝင်ငွေအနေနဲ့ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်--မြန်မာစီးပွားရေးအကြောင်းပြောနေကြတဲ့သူတွေ GDP နဲ့ချိန်ထိုးနိုင်းယှဉ်ကြတဲ့သူတွေ ကိုပြောချင်တာကဒီငွေပမာဏဟာအခုချိန်မှာအလေးထားရမဲ့ပမာဏဖြစ်နေပါပြီ-- အောက်ခြေလူတန်းစားရဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှု ကိုကုစားပေးနိုင်တဲ့တောနေဆင်းရဲသားလူတန်းစားတွေအတွက် အဓိကမိသားစုဝင်ငွေတစ်ရပ်ဖြစ်လာပါပြီ-- ပြောနိုင်ပါတယ်-- ဒီအပိုင်းမှာတော့ data ကောက်ယူမှုအားနည်းနေလိမ့်မယ်ဆိုတာ--စာရင်းကောက်ယူမှုအားနည်းနေတော့ ဘယ်လောက်သွားနေတယ် ?ဘယ်လောက်ဝင်ငွေရှိနေသလဲ? သွားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ပြည်ပမှာဘာအလုပ်တွေအများဆုံးလုပ်ရသလဲ? skilled လား? unskilled လား? တောနေလူတန်းစားတွေလား ? အခြေခံပညာအရည်အချင်းအနိမ့်ဆုံး-- အမြင့်ဆုံးဘယ်လောက်ရှိကြသလဲ? မြန်မာ့စီးပွားရေး ပမာဏ မှာ မြန်မာရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့ဝင်ငွေ ကဘယ်အချိုးအစားလောက်ပါဝင်နေသလဲ? အချိုးအစားပမာဏ ကအလေးထားလောက်တဲ့ ပမာဏဖြစ်နေပြီဆိုရင် အားပေးမလား? မင်းတို့မသွားရဘူး ပြည်တွင်းမှာပဲ ရရာ ကြုံရာ ကျပန်းလုပ်ပဲ လုပ် လို့တားဆီးသင့်ပါသလား? မရပါခင်ဗျား--
ဒီလိုကိစ္စရပ်တွေအတွက် မောင်တိုင်ပင်သာ မသိတာ-- မြန်မာလူငယ်တွေလေ့လာထားတဲ့ research တွေရှိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်-- ဘယ်လိုပညာရပ်အဆင့်အတန်းတွေအတွက် ရက်တိုလေ့ကျင့်ပေးလိုက်ဖို့ သင်တန်းတွေ ဖွင့်နိုင်ပြီလား? ပုဂ္ဂလိကအပိုင်းကကောစိတ်ဝင်စားမှု ရှိပါသလား? ဒီအပိုင်းတွေမှာ ရိုက်စား တနပ်စား တွေဝင်လာနိုင်တဲ့ risk အများကြီးရှိပါတယ်-- ဂတိတည် ဖြောင့်မတ်တဲ့ အေဂျင်စီအသင်းတွေလည်းလိုပါလိမ့်မယ်--ဥပမာတစ်ခုပြောရရင် domestic workers တွေလွှတ်တဲ့အခါ လွှတ်မဲ့နိုင်ငံရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီသော ရက်တိုသင်တန်းတွေဖွင့်ရပါမယ် -- ဒီနေရာမှာ သွားလိုကြတဲ့ပြည်သူတွေဟာဆင်းရဲသားလူတန်းစားများပါမယ်-- သင်တန်းတက်နိုင်ဖို့ငွေကြေးသုံးစွဲဖို့ရာမှာအခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်--အကြမ်းဖျင်းသိရတာက domestic workers တွေအနေနဲ့ ပထမဆုံး လာတဲ့အခေါက်မှာ ၇-၈ လစာလောက် ကို ၂ဖက်အေဂျင့် တွေကယူလေ့ရှိပါတယ်--ဒါမျိုးကစိတ်ထားကောင်းမွန်တဲ့အိမ်ရှင်ဆီရောက်ရင်တော်သေးပေမဲ့ စိတ်ထားမကောင်းတဲ့အိမ်ရှင်ဆီရောက်ရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထိ ထိခိုက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်--ဒီစနစ် ဒီအလေ့အကျင့်တွေရှိတာသိနေတဲ့အလျောက်သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအနေနဲ့ဘဏ်တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်။အခုပြောနေတာတွေကိုဌာနတွေကမောင်တိုင်ပင်ထက်ပိုသိပါလိမ့်မယ်--
းGDP ဝင်ငွေမှာ ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားတွေပြန်ပို့တဲ့ငွေအချိုးအစားဟာ လောက်လောက်လားလားရှိနေပြီဆိုရင် သူတို့တတွေသွားနိုင်လာနိုင်လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်ဖို့ မောင်တိုင်ပင်တို့ ဝန်ကြီးဌာနတွေကဘာတွေလုပ်ကိုင်ပေးထားပါသလဲ? ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့ လိုပါတယ် --labour intensive industry တွေပြည်တွင်းကို ဝင်လာပါ လုပ်ပါ ကိုင်ပါ နဲ့ ဘိတ်ခေါ်နေမယ်-- အဲဒီ industry တွေမှာ ဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့လုပ်သားတွေမွေးထုတ်ပေးတဲ့အပိုင်းမှာ အစိုးရလည်းလုပ်မယ်-- အစိုးရ နဲ့ ပုဂ္ဂလိ ပေါင်းပြီး PPP အနေနဲ့ လုပ်ပေးမွေးထုတ်မယ်--ပြည်ပမှာသွားအလုပ်လုပ်လိုကြတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် ရက်တို training program တွေဖွင့်နိုင်အောင်အားပေးရမယ်-- လုပ်ပေးရမယ်-- barriers တွေရှိသလား ? အစိုးရက ဘာဘာ ညာညာ စဉ်းစားမနေနဲ့ ဖြေလျှော့ပေးနိုင်ရမယ်--financial support လည်းဘဏ်တွေနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး SME loan အနေနဲ့ပေးရပါမယ်--အဲတော့ဗျာ -- မလုပ် မရှုပ် မပြုတ် သွေးအေးနေကြတဲ့ ဌာန တွေအဖြစ်နိုင်ဆုံး အလုပ်တွေစလုပ်ကြဖို့ အချိန်အခါ ရောက်နေပါပြီ -- ကြီးကျယ် တဲ့ အလုပ်တွေလည်းလုပ်ဖို့ စဉ်းစားကြပေါ့ဗျာ-- တစ်ဖက်ကသေးငယ်ပေမဲ့ လတ်တလောဇောင်းပေး လုပ်ရမဲ့အလုပ်တွေလည်းစဉ်းစားပြီးလုပ်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ် -- ကျနော်တို့ မြန်မာတွေ ဆန်မရှိ စောက်စားကြီးကောင်တွေမဟုတ်ပါဘူး အလုပ်ဟူသမျှဂုဏ်ရှိစွ လို့ အများကခံယူထားပါတယ်--
Posted by MaungTaing Pin at Wednesday, February 20, 2019 No comments:
FDI ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု များ ဝင်လာအောင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင်အဓိက စိန်ခေါ်မှုသည်ရခိုင်ဒေသရိုဟင်ဂျာအရေးကိစ္စဖြစ်သည်ဟုယေဘူယျသုံးသပ်ကြပါသည်-- မှန်သင့်သလောက်မှန်သော်လည်းလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းအခြေအနေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ကြည့်ဖို့လိုမည်ဟုထင်ပါသည်--အမေရိကန်၊အနောက်ဥရောပနိုင်ငံများမှရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ကိုယခုအချိန်၌မျှော်လင့်၍မရနိုင်သေးသော်လည်းတရုတ်၊ ဂျပန်၊ စင်ကာပူ၊ ကိုရီးယား၊ ထိုင်း တို့၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု များကတော့အလားအလာကောင်းသည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။
တရုတ်ကိုတော့ မြန်မာတွင်လာရောက်ရင်းနှီးမှာကိုပြည်သူအများကကြောက်ကြပါသည်၊လက်ရှိလုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသောတရုတ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အချို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ဒေသအကျိုးစီးပွားများကိုလစ်လျူရှုခဲ့သောကြောင့်ဒေသခံများနှင့်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကာပြဿနာများပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းကိုမလိုလားကြ ပါ။ တရုတ်ပြည်တွင်းမှာလည်း manufacturing industry ကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့ပြီး service industry ဘက်ကိုကူးပြောင်းရန်မူဝါဒများပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားရာ တရုတ်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ manufacturing industry လုပ်ငန်းများကိုအားသာချက်ရှိသောနိုင်ငံများသို့ရွှေ့ပြောင်းတော့မည်ဖြစ်ရာ အနောက်ဥရောပ၊အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ နှင့်အဆင်မပြေသော မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့လာရန်အလားအလာနည်းပါသည်ဟုဆိုကြပါသည်။
ဂျပန်တွင်လည်း ငယ်ရွယ်သည့် ကျွမ်းကျင်အလုပ်သမား များရှားပါးလျက်ရှိရာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများသည်မလွဲမသွေဂျပန်ပြင်ပသို့ များထွက်လာရဖွယ်ရှိပေသည်။ထိုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်ဂျပန်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကိုမျှော်လင့်နိုင်ပါသည်။ ထိုအတွက်လည်းမြန်မာနိုင်ငံကအစိုးရပိုင်းကောပုဂ္ဂလိက ပိုင်းကပါ အားစိုက်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်--
စင်ကာပူသည် အာဆီယံနိုင်ငံချင်းဖြစ် ၍မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံများမှာ ထိပ်တန်းမှာရှိနေပါသည်။အများစုမှ USD million ပရိုဂျက်များ ဖြစ်ပြီး billion နှင့်ချီသောပရိုဂျက်အနည်းအကျဉ်းသာရှိပါသည်--
၂၀၁၈ခုနှစ်မှာ GDP သည် ၆.၄% မှ ၅.၉% သို့အနည်းငယ်ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ဒီအချက်ကလည်း ရခိုင်ပြဿနာကြောင့် FDI ဝင်ရောက်မှု နှေးကွေးသွား၍ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ၂၀၁၇ခုနှစ် နှစ်လည် မှ ၂၀၁၈ခုနှစ်အထိ FDI ဝင်ရောက်မှု ပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅.၇ ဘီလီယံရှိခဲ့ပါသည်။အထူးသဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍမှာသိသာထင်ရှားသည့်တိုးတက်မှုများရှိခဲ့ပါသည်။အထူးသဖြင့် CMPအထည်ချုပ်ကဏ္ဍ၌ လုပ်ခဈေးနှုန်းသက်သာခြင်း နှင့် ပို့ကုန်သက်သာခွင့်များ ( အထူးသဖြင့်အနောက်ဥရောပ နှင့်အမေရိကန်)ရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၈ခုနှစ်တွင်ကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေအသစ်ကိုပြဌါန်းသတ်မှတ်နိုင်ခဲ့သောကြောင့်ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအခွင့်အလန်းများပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါသည်။ပြည်ပမှ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည်ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများတွင်ရှယ်ယာ ၃၅% အထိပါဝင်နိုင်ပါသည်။Doing business အပိုင်း၌ ranking တက်လာစေရန်ရည်ရွယ်၍ Myanmar Companies Online ( MyCO) မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို တည်ထောင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
ပညာရေးကဏ္ဍ၌လည်းဖြေလျော့မှုများဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး မြန်မာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတိုးတက်ရေးကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ဒေသတွင်းနိုင်ငံများမှ ပုဂ္ဂလိ ကျောင်း၊ ကောလိပ်များ လာရောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြပါသည်။ ပြည်ပကုမ္ပဏီများကို လက်လီလက်ကားဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်Metro ကဲ့သို့နိုင်ငံခြား retailing ကုမ္ပဏီများ များမကြာမီကာလအတွင်းပြည်တွင်းသို့ဝင်ရောက်လာဖွယ်ရာရှိပါသည်။
၎င်းပြင်မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်ကလည်းနိုင်ငံခြားအာမခံကုမ္ပဏီများ နိုင်ငံခြားဘဏ်များကိုပြည်တွင်း၌ဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန်ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။ဘဏ်များ၏ကဏ္ဍတိုးတက်လာရခြင်းမှာအင်တာနက်အဆက်အသွယ်များတိုးတက်လာရခြင်းသည်အဓိကဖြစ်နေပါသည်။သို့သော်ပြည်သူလူထုအများစုသည်ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအပြည့်အဝမခံစားနိုင်ရသေးပါ။mobile banking, internet banking, QR code, bank pay စသည့် အင်တာနက်အွန်လိုင်းအခြေခံဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများသည်ပြည်သူလူထုအကြားစိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့လျှက်ရှိရာ လက်လုပ်လက်စားလူတိုင်းလိုလို smart ဖုန်းများကိုင်နိုင်လာကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အစားအသောက်အငတ်ခံချင်ခံမည်၊အဝတ်အစားချွေတာဝတ်မည် smart ဖုန်းလေးတော့ တရုတ်လုပ်ပင်ဖြစ်စေ လူငယ်လူရွယ်တိုင်းလိုလို ကိုင်ကြသည့်အခါဘဏ်များသို့ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းထက် on line payment များဆောင်ရွက်ရန်အားသန်နေခြင်းကြောင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်တိုးတက်မှုများရှိလာနိုင်ပါသည်။ payment စနစ်များအဓိကဆောင်ရွက်သည့် Red Dot ကုမ္ပဏီပိတ်သိမ်း၍ထွက်ပြေးရခြင်းမှာလည်းဘဏ်များ၏ on line payment စနစ် များဖွံဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း TOP Up Card အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများလည်းကျဆင်းလာနိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။ဘဏ်မျာသည် အောက်ခြေ မှအခြေခံ လူတန်းစားများလုံခြုံစိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ရန် ရှင်းလင်းတိကျသောမြန်မာလိုလမ်းညွန်ရေးထားသည့်စနစ်များနှင့်ထိတွေ့ပေးရန်လိုပါသည်။
ဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့်ဘဏ်အသုံးပြုသူများ transaction ပြုလုပ်ရာတွင်ငွေသားစက္ကူများကိုဆာလာအိတ်များတွင်ထည့်၍ငွေအသွင်းအထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအားမပေးပဲ ချက်လက်မှတ် များအသုံးပြုလာစေရန် promotion များလုပ်သင့်ပါသည်။ နယ်တစ်နယ်မှ တစ်နယ်ငွေလွှဲရာတွင်လည်းဆာလာအိတ်ကြီးများနှင့်ငွေစက္ကူများဘဏ်သို့ယူလာပေးသွင်းပြီးအခြားတစ်ဖက်၌ လွှဲပေးလိုက်သောငွေစက္ကူများကိုဆာလာအိတ်ကြီးများဖြင့်ပြန်ထုတ်ယူခြင်းသည် ပုဂ္ဂလိက ဘဏ် များ၏နေ့စဉ်မြင်ကွင်းများဖြစ်ကြပါသည်။ ချက် လက်မှတ်များဘာကြောင့်အသုံးမပြုကြပါသလဲ ? ရှင်းပါသည်။ clearing အချိန်ကြာသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။စင်ကာပူဘဏ်များမှာလည်း ချက်လက်မှတ်ကိုနံနက်ပိုင်းမှာ ဘဏ်ကို မသွင်းနိုင် လျှင်နောက်တစ်ရက်မှမိမိအကောင့်မှာငွေဝင် လာနိုင်ပါသည်။clearing အတွက်ကတော့ နေ့တစ်ဝက်ခန့် အချိန်ယူနိုင်ပါသည်။ ပြီးခဲ့သောအစိုးရများလက်ထက်က ငွေစက္ကူ များအပေါ်တရားမဝင်ကြောင်းကျေညာချက်များမကြာခဏထုတ်တတ်သောကြောင့်ပြည်သူလူထု၏စိတ်သန္တါန် တွင်ငွေစက္ကူများကိုကိုင်တွယ်ရေတွက်နေရမှသာစိတ်ချရသည့်သဘောရှိနေတတ်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့နေသူဌေးအများစု၏နေအိမ်တွင် vault များတည်ဆောက်ထားကြသည်ဟု ကြားဘူးပါသည်။ဟုတ်မဟုတ်တော့ မပြောနိုင်ပါ။ဆိုလိုသည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာအမြစ်တွယ်နေသည့် ငွေစက္ကူများဆာလာအိတ်များတွင်ငွေအသွင်းအထုတ်လုပ်နေခြင်းကိုလျော့ပါးလာစေရန်နည်းလမ်းတစ်ခုခု ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။လက်ငင်းအကျိုးကျေးဇူးမှာ ငွေစက္ကူများကို ရေတွက်ကိုင်တွယ်နေခြင်းသက်သာသွားသဖြင့်ဘဏ်ဝန်ထမ်းများကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေခြင်း၊ငွေစက္ကူရိုက်နိုပ်ရသည့်စရိတ်အကုန်အကျအနည်းငယ်သက်သာသွားနိုင်ခြင်းစသည့်အကျိုးကျေးဇူးများရနိုင်ပါသည်။
ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုများသည် ၂၀၁၈ မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်သို့ဆက်လက် ရွေ့လျားနိုင်ဖွယ်ရှိပြီး ပျမ်းမျှ GDP တိုးတက်မှုသည် ၆.၄% ခန့်ရှိနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားပါသည်။e-government စနစ်အကောင်အထည်ဖေါ်ရန်ဝန်ကြီးဌာနများ နှင့် ဒေသအစိုးရများ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေကြသော်လည်းအားနည်းချက်များရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အင်တာနက်အဆက်အသွယ်များကောင်းမွန် လာသောကြောင့် ပြည်တွင်း၌ on line marketing လုပ်ငန်းများကိုတစ်နိုင်တစ်ပိုင်လုပ်လာကြပါသည်။ပြည်ပမှ Alibaba,eBay, Amazon စသည့် on line marketing giant များလည်း မြန်မာ့ products များအပေါ်လုပ်ကိုင်လာခဲ့ကြပါသည်။ တစ်ဖက်၌လည်း shopping mall, Super Market, Super Center စသည့် retailing outlets များလည်းရန်ကုန်မြို့တင်သာမက နယ်မြို့ကြီးများတွင်ပါ shopping mall များတည်ဆောက်လုပ်ကိုင်လာကြပါသည်။ shopping mall များသို့ကိုယ်တိုင်သွားရောက်
ဈေးဝယ်ရန်အချိန် မ ပေးနိုင်သူများသည် လူမှု မီဒီယာများမှတဆင့် on line shopping များတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်လုပ်လာကြပါသည်။ on line marketing လုပ်ငန်းများတွင်တွင်ကျယ်ကျယ် လုပ်ကိုင်လာကြသည်နှင့်အတူပြည်တွင်းစာတိုက်လုပ်ငန်းများ၊ courier services လုပ်ငန်းများ၊ ကြော်ငြာလုပ်ငန်းများလည်းတစ်ဖက်၌ဖွံဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်ပါသည်။
ပြင်ပမှရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ အများအပြားဝင်ရောက်လာစေရန် ဆွဲဆောင်ရာ၌ ပြည်တွင်းဌာနဆိုင်ရာဗျူရိုကရေစီ ယန္တရား က investment process friendly ဖြစ်ရန်အရေးပါသောအပိုင်းမှာရှိနေပါသည် process friendly ဖြစ်မဖြစ် ကို doing business ranking ကိုကြည့်ရုံနှင့်သိသာနိုင်ပါသည်--သူတို့ criteria အရတချက်ချင်းပြင်၍ရနိုင်သောအချက်များကိုသက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနအဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့်ချက်ချင်းပြင်ဆင်ပြဌါန်းပေးရန်လိုအပ်ပါသည်--နိုင်ငံအကြီးအကဲအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနများကိုဝက်အူတင်းပေးရန်လိုအပ်ပါသည်--မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန် အလားအလာရှိသော နိုင်ငံစုံမှ MNC ကုမ္ပဏီ ကြီးများ ၁၀ ခုခန့်ကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဝန်ကြီးဌာန မှတိုက်ရိုက်ချဉ်းကပ်ပြီး case by case စဉ်းစားကာ သူတို့ ဘာလိုသလဲ ဆိုသည်ကိုဆွေးနွေးဖေါ်ထုတ်၍ ချက်ချင်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးသည့် လုပ်နည်းစနစ်တစ်ခုကိုစဉ်းစားစေချင်ပါသည်။ ASEAN briefing ရဲ့ outlook ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးသည့် National Export Strategy ပေါ်မူတည် လျှက်ရှိပြီး အဓိကအားသာချက်များရှိနေတဲ့အပိုင်းကတော့ garment sector, natural resources, agricultural products, နှင့် tourism ( eco-tourism) communication technology တို့ဖြစ်ကြောင်းဖေါ်ထုတ်ထားပါသည်။နောက်တစ်ခုထပ်ဖြည့်စွက်လိုသည်မှာ retailing business ဖြစ်ပါသည်။
ကျမ်းကိုး Myanmar’s investment outlook for 2019
Posted by MaungTaing Pin at Wednesday, February 20, 20196comments:
ကျနော်လိုပဲထိုင်းဆန်ကိုအပြောင်းအလဲစားချင်နေကြတဲ့ consumers တွေလည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိကြမှာပါ။ ပေါ်ဆန်းဟာလုံးရှည်တွေအမြင်များနေတဲ့အတွက် short and round grain ဟာအမြင်ဆန်းနေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ပေါ်ဆန်းထုတ်လုပ်မှုဟာအခြားစပါးတွေနဲ့ယှဉ်ရင်အထွက်ကအတော်အတန်နည်းနေပါတယ်။ ပြည်တွင်း ဝယ်လိုအား ကလည်းများပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပြည်ပကိုပို့တဲ့အခါ ပြည်တွင်းဈေးထက်ပိုမရနိုင်တော့ လို့ exporter တွေလက်ရှောင်ကြပါတယ်၊ productivity တက်လာမယ်၊ ပြည်ပဝယ်လိုအားက တက်လာမယ်၊ ဆိုရင်ဒီဆန်ချောအမျိုးအစားကို ဒေသတော်တော်များများမှာ တိုးချဲ့ စိုက်ပျိုးလာကြမယ်ဆိုရင်တော့အလားအလာရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်၊ ထိုင်းတွေလည်းသူတို့ခေါက်ဒေါ့မာလီကို ကမ္ဘာဆန်စားသုံးသူတွေအကြားမှာ ရိုးအီလာနေပြီဆိုတာသူတို့လည်းသတိပြုမိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဗြုန်းဆို short and round grain ပေါ်ဆန်း ကို သူတို့ဆီမှာမျိုးထုတ်လုပ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စိုက်ပြီး အဆက်အသွယ်ကောင်းတဲ့ သူတို့က များကမ္ဘာကိုများတင်ပို့ လိုက်လို့တော့ ကျုပ်တို့တတွေဟုတ်ပေ့ရှိနေပါလိမ့်မယ် ဆရာတို့ရေ--
NYDC နှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းပြောကြားချက်၂နာရီခွဲကျော်ကိုအချိန်ပေးပြီးနားထောင်ခဲ့ပါတယ်။ moderator အနေနဲ့ အချိန်ကို timely ဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းပေးရတာကိုနားလယ်ပါတယ်။ ဒါလည်းfloor ကမေးတဲ့သူရဲ့ အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီးလိုတိုးပိုလျှော့ကစားသင့်ပါတယ်။ဒီလိုပွဲမျိုးမှာ မေးခွန်းမေးသူတွေက အခရာကျပါတယ်၊ မေးခွန်းကိုသိုင်းဝိုင်းပြီးမေးမှသာ good question ဖြစ်ပါမယ်--ဒဲ့ မေးခွန်းကိုမသိုင်းမဝိုင်းပဲမေးပါက လူရီစရာဖြစ်ပါမယ်--မေးသူတွေ အားလုံးအတွေ့အကြုံ ရှိ အင်ဂျင်နီယာတွေများပါတယ်မေးသွားတဲ့မေးခွန်းတွေကောင်းပါတယ်။
ဒီ ဖိုရမ် ကိုကြည့်နေရင်းကျနော့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတာ၂ခုရှိပါတယ်။ ပထအချက်က Alibaba ရဲ့CEO Jack Ma ပြောသွားတဲ့မှတ်သားစရာအချက်တစ်ခုပါ။ Jack Ma ဟာ တက္ကသိုလ်မှာထူးချွန်တဲ့ကျောင်းသားမဟုတ် သလိုသူ့ဘဝအစဦးပိုင်းကာလတွေမှာကံတော်တော်ဆိုးခဲ့သူပါ။သူက သူဘာမှမတတ် ပါဘူး။ပညာအခြေခံလည်းမထူးချွန်ပါဘူး။ Alibaba ကိုထူထောင်တော့သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်အလိုက်အထူးချွန်ဆုံးလို့ထင်ရသူတွေကိုသူငွေကောင်းကောင်းပေးပြီးငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်။စာရင်းအင်းဆိုရင်လည်းစာရင်းအင်းအလျောက်၊ အိုင်တီဆိုရင်လည်းသူ့ နယ်ပယ်မှာထူးချွန်သူတွေကိုငှားရမ်းအသုံးပြုစေခိုင်းခဲ့ပါတယ် တဲ့--(Jack Ma ကိုမြန်မာပြည် လာဖို့ ဖိတ်ဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်-- သူနဲ့လည်းအာရှသားချင်းဖြစ်လို့ အလုပ်တူတွဲ လုပ် လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်)
အခု NYDC နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဟာမြန်မာ developer လောကမှာအမည်ကောင်းရှိနေတဲ့ ဦးသိမ်းဝေကိုတာဝန်ပေးခဲ့တဲ့အပြင်သူကနေတဆင့်စင် ကာပူက ဂျောခ်ျ ရိုးကိုပါ independent director အဖြစ်တာဝန်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအဆင့်အထိ ရန်ကုန်အစိုးရ ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းလုပ်ရပ်ဟာသင့်လျော်မှန်ကန်နေတယ်လို့ယူဆပါတယ်-- Jack Ma လုပ်သလိုပဲကိုယ်တိုင်နားမလည်မကျွမ်းကျင်ပေမဲ့နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့သူကိုတာဝန်ပေးခဲ့တော့ဒီ NYDC ပရိုဂျက်ကိုစတင်စဉ်အချိန်ကာလထက်ယခုအချိန်မှာပြည်သူကတစ်စထက်တစ်စလက်ခံလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလို ဖိုရမ် တွေလုပ်ပေးခြင်းကလည်း accountability ဖြစ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။လူတွေလည်းသဘောပေါက်လက်ခံလာကြပါလိမ့်မယ်--
ဒီနမူနာကောင်းကိုယူပြီးအခြားအစိုးရအဖွဲ့ institutions တွေလည်းကိုယ်မလုပ်တတ်ဘူး၊မကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုရင်ကျွမ်းကျင်သူကိုရှာဖွေပြီး advisor ဖြစ်စေ consultant ဖြစ်စေ တာဝန်ပေးစေခိုင်းပြီးလုပ်ငန်း စီမံကိန်းတွေအကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ ဒီနမူနာကောင်းတွေထဲက ဦးသိမ်းဝေပြောတဲ့ ဘဏ်တွေမှာ CEO ကိုနိုင်ငံခြားသားမခန့်ရဘူးလို့ ဗဟိုဘဏ်ကကန့်သတ်ထားပါတယ် လို့ပြောခဲ့တာကိုအလေးပေးဆွေးနွေးချင် ပါတယ်-- ဒါပေမဲ့ဘဏ်တော်တော်များများ နိုင်ငံခြားသား အချို့ ခန့်ထားပြီး ဘဏ်ကို run လုပ်နေကြတာကိုသိနေရပါတယ်။ CEO လို့တော့အမည်ခံခိုင်းချင်မှခိုင်းပါလိမ့်မယ်။အရင်ကတော့ ဘဏ်ကိုနိုင်ငံခြားသားများခန့်ထားခြင်းဟာကုန်ကျစရိတ်ကိုတက်စေတယ်လို့ ကျနော်ယူဆခဲ့ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာပဲ ဘဏ်လုပ်ငန်းဟာ ငွေလွှဲ အပေါင်ခံ ငွေချေး စတဲ့ အခြေခံ conventional banking products တွေပဲလုပ်နေတာဖြစ်လို့ မလိုအပ်သေးဘူးလို့ယူဆခဲ့ပါတယ်။အခုအခါမှာတော့ international banking, core banking, စတဲ့ နိုင်ငံတကာဘဏ်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်လို့ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေလိုအပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ ဘဏ်၂ ခုမှာအကောင့်ဖွင့်ထားတော့ အောက်ခြေဘဏ်လုပ်သားတွေနဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့အခါကိုယ်ဘဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အခြားနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်သွယ်လုပ် ကိုင်ပေးရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ ကျွမ်းကျင်မှုရှိကြပါတယ်။ KYC ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဘဏ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ဆိုရင်ဘဏ် က personal manager တစ်ယောက်ထားပေးထားတော့ သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စအဝဝ ဟာမျက်ခြေမပြတ်တော့ပါဘူး။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင် ရှောန်တာနယ်လ် လိုမြန်မာစီးပွားရေးကျွမ်းကျင်သူကိုတောင် Advisor ခန့်ထားသေးတာပဲ ဒီအချက်ကတော့ ပြင်သင့်မပြင်သင့်စဉ်းစားဖို့ကောင်းနေပါပြီ နိုင်ငံခြားသားကိုစိုးရွံ့ တဲစိတ် xenophobia ဟာဦးနေဝင်းကအစ စစ်အာဏာရှင်တော်တော်များများစိတ်ထဲမှာကိန်းအောင်းနေတတ်ပါတယ်-- ယုတ်စွအဆုံးမကြောက်တောင်ယုံကြည်ဖို့မသင့်ဘူးကိုယ့်ကိုဆော်သွားကောင်းဆော်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တော့ဆက်ဆံလေ့ရှိတတ်ပါတယ်--နိုင်ငံခြားသားကိုဆန့်ကျင်လိုက်ရရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ငါတော်တော်အမျိုးချစ်စိတ်ရှိတာပဲလို့အထင်ရောက်တတ်ပါတယ်-- ဒီလိုမျိုးဆန်မရှိသောက်စားကြီးပြောတတ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်တစ်ယောက်သူ့ သားကနိုင်ငံခြားသူကောက်ယူလိုက်တော့ အရှက်ပြေ သတင်းစာတွေမှာ သားအဖြစ်မှစွန့်လွှတ်ကြောင်းထည့်ရတော့တာပါပဲ-- ဒါကြောင့်အခုခေတ်အချိန်အခါမှာ အပြောမကြီးဖို့ လိုပါတယ်--
နံပါတ်၂အချက်ခေါင်းထဲရောက်လာတာတော့ ဘယ်သူမှ နေပြည်တော်ကြီးတည်ဆောက်ခဲ့ပုံနဲ့မနိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြဘူး ဆိုတာပါ--ထိုစဉ်က ဆောက်နေမှန်းလည်းဘယ်သူမှဂဃနဏမသိကြဘူး-- အစပထမတော့ စစ်ရုံးကိုအလံပြဘုရားလမ်းကနေပျဉ်းမနားပြောင်းမယ်ဆိုတာလောက်ပဲ သတင်းသဲ့သဲ့ကြားရပါတယ်-- ၂၀၀၅လောက်ကြမှအစိုးရရုံးတွေပါရွှေ့ ရမယ်ဆိုတာသတင်းကြားခဲ့ရပါတယ်--ဖိုရမ်မှာ ဦးသိမ်းဝေက NYCD project မှာ lane ၂၀ ပါလမ်းမကြီးတော့မဖေါက်ပါဘူးလို့ မဝံ့မရဲလေးပြောပါသေးတယ်- ဟုတ်တယ်လေ--သူ့ ရန်သူတော်ကြီးရှစ်လုံး ဦးဆောင်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့နေပြည်တော်မဟုတ်လား--
နေပြည်တော်ကြီးတည်ဆောက်ပြီးစီးတာ ၁၂-၁၃ နှစ်လောက်ရှိပြီ-- လုံးဝစည်ကားတာမတွေရဘူး-- အစိုးရရုံးစိုက်မြို့ ဖြစ်လို့သာရုံးဖွင့်ရက်တွေမှာလူများတာတွေ့ရပါတယ်-- လမ်းတွေပေါ်မှာလည်းယဉ်အသွားအလာနည်းပါးပါတယ်-ဒါပေမဲ့လမ်းတွေကအကျယ်ကြီးပါ။-ငွေလည်းသောက်သောက်လဲကုန်ခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့ဆောက်လုပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ so called တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ခရိုနီ သူဌေးဘွဲ့တွေရပြီးစားမကုန်အောင်ချမ်းသာလာခဲ့ကြပါတယ် -- နေပြည်တော်စည်ကားဖို့လုပ်ချင်ရင် နိုင်ငံခြားမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့တက္ကသိုလ်တွေလာဖွင့်ခိုင်းပါ-- အစိုးရကလည်း အခုစိုက်ပျိုးရေး မွေးကု အပြင် အခြား အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း institutes တွေဖွင့်ရပါမယ်-နေပြည်တော်ကောင်စီဒေသကို free trade zone အဖြစ်သတ်မှတ်မလား--အခွန်အကောက်မရှိဘူး--ပစ္စည်းတွေအခြားနေရာဒေသတွေထက်သက်သာမယ်။ ဆေးရုံကောင်းတွေရှိနေတဲ့ အတွက် ဆေးကျောင်း ကို နိုင်ငံခြားနဲ့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်မလား -- ဒါတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်-- တက္ကသိုလ်တွေကတော့ campus life ရှိတဲ့ boarding and lodging ပေါ့-- နေပြည်တော်တည်ဆောက်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ယခုအချိန်ထိaccountability လုံးဝမရှိတာတော့သေချာပါတယ်--တာဝန်ယူလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းလုံးဝနှုတ်ဆိတ်နေ နေကြတယ်။
တည်ဆောက်ပြီးခါစ ဟိုတယ်ဇုန်ရှေ့ ကလမ်းမီးတိုင်တွေဟာ ၄ ခါပြောင်းခဲ့တာကိုမှတ်မှတ်ရရသတိထားမိခဲ့ပါတယ် -- ဒီဇိုင်းပြောင်းတယ်-- နေရာပြောင်းတယ်-- လမ်းဘေးကနေ လမ်းလယ်ကျွန်း-- လမ်းလယ်ကျွန်းကနေ လမ်းဘေး၂ဖက်ပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ် -- ဘယ်သူကညွှန်ကြားလို့ ဘယ်သူကပြောင်းတာလဲတော့မသိပါ-- အိမ်တွေဆောက်ရင် ၂ ထပ်မဆောက်ရပါဘူး-- မြေကွက်ပေးနိုင်သူကတော့ အာဏာအရှိဆုံးပါပဲ-- ဘယ်လိုမူနဲ့ပေးသလဲတော့ မသိပါ-- ဒီနေ့ လုပ်ငန်းတည်ထောင်ထားသူများအနေဖြင့် ချပေးလိုက်တဲ့သူဆီကဈေးကြီးပေးဝယ် ရတာချည်းပါပဲ--ငွေကြေးစည်းစနစ်မရှိ ဗျဲလျံ model နဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ နေပြည်တော်နဲ့ ယခု NYDC နဲ့တော့အတော် ကွာ ခြားပါလိမ့်မယ်-- ယူစရာ သင်္ခမ်းစာတွေလည်းအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်--မြို့ တော်တည်ဆောက်မှုအပိုင်းမှာ NYCD နဲ့နိုင်းယှဉ်ရင် project formulation ကအစကွာခြားပါလိမ့်မယ်--
လူဘိန်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ပြောရရင်နေပြည်တော်တည်ဆောက်မှု model နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပါက ၅ နှစ်လောက်အတွင်းမှာ ဒီလိုပုံစံနှုန်းထားနဲ့ဆိုရင် phase 1 ကတော့ အောင်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ် လို့ယုံကြည်ပါတယ်--နည်းစနစ်အသစ်တွေနဲ့စဉ်းစားတည်ဆောက်ကြမှာဖြစ်လို့တစ် ခုနှင့်တစ်ခု sequence ဖြစ်ကြမယ် ဆိုရင်မြန်မြန်အကောင်အထည်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဒါကိုမြင်ပြီး investment တွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခု လိုက်လာမယ်ဆိုရင် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း လက်ခမောင်းခတ်နိုင်ပါပြီ--
Labels: Townhall meeting NYDC